च्याम्पियन Raceway | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! च्याम्पियन Raceway | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
को जुवा उद्योग राम्रोसँग सम्बन्धित कुनै पनि खेल छ भने, यो निश्चित घोडा दौड च्याम्पियनशिप छ. यो अचम्मको दौड्ने बाटो अनुभव पहिलो पटक एक स्लट खेल मा मजा गर्न सकिन्छ. को लागि धन्यवाद च्याम्पियन Raceway, घोडा दौड को विषय मा आधारित तीन रील स्लट खेल. यस मोबाइल क्यासिनो तपाईं के जीत राख्न स्लट, त्यहाँ तीन रील र पाँच paylines छन्. खेल भीड जयकार को ध्वनि एक रेसकोर्स को पृष्ठभूमि मा सेट गरिएको छ. पाँच घोडाहरू एउटा डर्बी दौड्ने बाटो तपाईंले केही बोनस जीत मदत पनि छ. £ 0.25 र £ 100 हरेक स्पिन बीच सट्टेबाजी सीमा सेट गरिएको छ.
च्याम्पियन Raceway विकासकर्ता बारेमा
यो खेलाडी मोबाइल क्यासिनो तपाईं के जीत राख्न खेल igt विकास भएको थियो, विश्वव्यापी सबै भन्दा राम्रो अनलाइन क्यासिनो विकासकर्ताहरूले एक. तिनीहरू अनलाइन प्रयोगकर्ताहरूको लागि धेरै यस्ता नवीन खेल सिर्जना गरेका र ती मोबाइल र ट्याब्लेट सहित विभिन्न उपकरणहरूमा प्ले गर्न सकिँदैन.
त्यहाँ पाँच आधारमा यस प्रतीक हो मोबाइल क्यासिनो तपाईं के जीत राख्न एउटा खेल. तिनीहरूले यस्तो आधा कटा खरबुजा रूपमा फल को प्रतीक हो, नीलो अङ्गुर, बैजनी स्याउ, कागति र सुन्ताला. को खरबुजा प्रतीक तपाईं को खेल को शीर्ष भुक्तानी दिन्छ 100 पटक आफ्नो खम्बा. सुन्तला देश 75 सिक्का, स्याउ तिर्न 30, एक भुक्तानी संग अङ्गुर 15 र 10 को कागति लागि. यसबाहेक, त्यहाँ फल प्रतीक मा ओभरले रूपमा देखा कि पाँच अलग अलग रंग रिबन छन्. यी रिबन बोनस सुविधाहरू अनलक मा योगदान.
जंगली प्रतीक: '3X' संग गुलाब मा उल्लेख को प्रतीक यो स्लट को जंगली सुविधा छ. जंगली खेल मा सबै प्रतीक लागि कवर. यो प्रतीक तीन गर्दा payline मार्फत देखिन्छ, तपाईं विशाल को एक खम्बा जीत प्रदान गर्दछ 10,000 सिक्का.
Racetrack बोनस: त्यहाँ बस स्लट माथिको दौड्ने बाटो मा पाँच घोडा छन्. यो यस पाँच फरक बोनस सुविधाहरू अनलक मोबाइल क्यासिनो तपाईं के जीत राख्न खेल. Whichever घोडा पहिलो पुग्छ, तपाईं आफ्नो संवाददाता बोनस दिन्छ. जब एक स्पिन समयमा एक विशेष रंग रिबन देखिन्छ, संवाददाता घोडा एक तीन कदम उत्प्रेरित गर्छ. कदम को संख्या कि रील देखा सम्बन्धित रंग रिबन को संख्या मा निर्भर गर्दछ. रेखा मा, तपाईं जित्न सक्छौं5वा 10 मुक्त spins, वा सानो, मध्यम वा ठूलो Jackpot.
सारांश:यो मात्र छ मोबाइल क्यासिनो तपाईं के जीत राख्न एक दौड्ने बाटो सुविधा संग खेल. विभिन्न बोनस सुविधा र अद्भुत एनिमेटेड ग्राफिक्स संग, यो पक्कै पनि सम्झना छैन पर्छ स्लट छ.